8 Qodob Oo Laga Soo Saaray Shir Kismaayo Uga Socday Wasaaradaha Maaliyadda DFS Iyo Maamul Kuwa Goboleedyada – Goobjoog News
8 Qodob Oo Laga Soo Saaray Shir Kismaayo Uga Socday Wasaaradaha Maaliyadda DFS Iyo Maamul Kuwa Goboleedyada
Waxaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland lagu soo gaba-gabeeyay Madasha/Shirka Wada-xaajoodka Arrimaha Maaliyadda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada oo socotay muddo laba maalin ah.
Shirkan oo ahaa mid ay kasoo qeyb-galeen Wasiirka Maaliyadda DFS iyo Wasiirada Maamul Goboleedyada ayaa qodobadii kasoo baxay waxaa saxaafadda la wadaagay Maxamed Kaamil oo ah agaasimaha Wasaaradda Maaliyadda maamulka Jubbaland.
Qodobadii Kasoo Baxay Shirka:
1- Waxaa ay xoojiyeen ayideenna shirkii ugu horreeyay ee Wasiirada Maaliyadda ay yeesheen bishii November 3, 2015 kaasoo lagu yagleelay madasha Wasiirada Maaliyadda iyagoo weliba ku baaqay in laga wada shaqeeyo xoojinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale sare u qaadista hufnaanta maamulka maaliyadda dalka.
2- Waxey isku dhiirrogeliyeen in la helo lagana wada shaqeeyo wadiiqo isku furnaan ganacsi.
3- Waxey isla garteen in mideynta canshuurta dalku ay dhiirrogelin xoogan u yahay cirib tirka caqabadaha kala xernaanta ganacsiga maamul goboleedyada.
4- Waxey hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la xoojiyo maamul wanaagga iyo xaqiijista sare u qaadista hufnaanta maamulka maaliyadda dalka.
5- Waxey ansixiyeen tallooyin ay soo gudbiyeen guddiga farsamo ee xiriirka gobolada ee maaliyadda oo ku aadanaa nidaamka maamulka iyo maareynta dakhliga dalka.
6- Madashu waxey ku baaqday in bisha Jannaayo 2018 ay shirweyne isugu yimaadaan Wasiirada Maaliyadda ee dalka oo dhan iyo Wasiirada Kalluumeysiga loogana wada-hadlo qeybsiga kheyraadka dakhliga kalluumeysiga.
7- Waxey dureen sharci ahaanshiyaha heshiiska SOMA ee loo yaqaano SOMA Agreement, waxeyna ku talo bixiyeen in dib loogu laabto heshiiskaas lana waafajiyo shuruucda dalka iyo heshiiskii Geneva ee 1961-kii.
8- Madashu waxey fareen guddiga farsamada in ay soo dhiraan-dhiriyaan qaadashada habka canshuuraha qiimaha ku saleysan ee furdooyinka